Iphupha ngeeMpawu Discover ➡ Discover Online ▷ ➡️
Iimpawu zifumaneka ikakhulu kwiCawa yamaOthodoki. Igama "icon" lithathwe kwigama lesiGrike "eikon," elithetha nje "umfanekiso." I-icon ke ukholo lwecawa olubonakaliswe ngokomfanekiso kwaye lumele, ngokungathi kunjalo, iwindow kwilizwe lokomoya.
Okungabonakaliyo kuya kubonakala kwi-icon, abangcwele abane-halo bajonge kuyo el mundo Emhlabeni, bazibonakalisa kuye kwaye esi sisizathu esaneleyo sokunqula ii icon. Iimpawu zenziwe ikakhulu kwiipaneli zomthi ezilungiswe ngokukodwa kwaye ukupeyinta kungaphezulu kokupeyinta. Xa ujonga ii icon, ulawulo olomeleleyo lombala wegolide uhlala uqaphela kwaye kukho isizathu esikhethekileyo soku. Igolide yenye yezona zinto zixabisekileyo, ibonisa ubukho boMdali kwaye ubuqaqawuli bayo obukuyo yonke indawo kubandakanya ukukhanya kukaThixo.
Igama elithi "icon" lihlala linentsingiselo eyahlukileyo kwihlabathi lanamhlanje laseNtshona. Apha awuyi kufumana abangcwele ngokwenkolo, kodwa abantu abadumileyo abathi, benendawo ehloniphekileyo, ngokuqinisekileyo banokwenza izidalwa ezininzi zibe mhlophe ngomona. Nokuba nguMadonna, uMichael Jackson, uSophia Loren, okanye uMarilyn Monroe, bonke aba bantu baye bathathelwa ingqalelo kwaye bahlonitshwa njengee-icon ngengoma, ngobuhle, okanye ngetalente ebalaseleyo. Kodwa inye into ebadibanisa nokunxibelelana kwabo ngokwenkolo: ii-icon ezininzi ze-pop kunye nokwenza akusekho phakathi kwabaphilayo okanye kufikeleleke kubemi abaqhelekileyo kwanaxa besaphila.
I icon ivele njani emaphupheni akho? Luphi unxibelelwano olukhoyo kubomi bokwenyani kwaye wawuyintoni umxholo jikelele wephupha?
1 Uphawu lwephupha «Icon» - Ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «Icon» - Ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «Icon» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «Icon» - Ukutolikwa ngokubanzi
I-icon ihlala ifuzisela iankile eyomeleleyo elukholweni. Nangona kunjalo, ukuba ibonakala njengophawu lwephupha, i-icon ngokomfuziselo ayimeli ukuhlonitshwa kwesanta uqobo, kodwa endaweni yoko Ukubaluleka kosapho yokuphupha.
Olu phawu luphupha lubonisa ukuba unamathela kakhulu kubumbano losapho kwaye izithethe zamandulo zibaluleke kakhulu kuye. Kuxhomekeke kubomi bentsapho kubomi bokuvuka, "i-icon" yesimboli yephupha ikwabonisa umfanekiso wephupha ofanelekileyo, ohamba nawo usapho kunye nezihlobo.
Ukuba uzibona ephupheni uguqe ngamadolo phambi kwe icon, kuya kufuneka uzame ukukhumbula iimvakalelo ngeli xesha lokuphupha. Ukuba umntu uziva onwabile kwaye azalisekisiwe ngexesha okanye ngexesha lokucamngca, mhlawumbi kukho into ebomini bokuvuka ekufuneka baphile bonwabile kwaye banombulelo. Uyakwazi oku ephupheni kwaye ubonakalisa lombulelo ngokubonisa inkolelo yakhe kunye nolwazi lwamagunya aphezulu ngokunqula i icon.
Ukuba imeko yeemvakalelo idandathekile okanye ayikonwabisi xa ujonga umfanekiso wesanta, kunokubakho okwenyani emva kwayo. ukuphoxeka okanye ukuziva unetyala. Umphuphi uzifumana ekwimeko yokuphelelwa lithemba, uziva ngathi ulahliwe ngokhuseleko lukaThixo kwaye ugoba intloko ngokurhoxa nasemadolweni phambi komfanekiso we icon.
Uphawu lwephupha «Icon» - Ukutolikwa kwengqondo
Kwinqanaba leengqondo lokuchazwa kwephupha, umfanekiso wephupha we icon ubonakalisa umzamo woku ukugqibelela Ukuphupha kwaye kwangaxeshanye ukwamkelwa ukuba umntu uyafa kwaye akafezekanga kubukho bakhe bobuntu.
Ukuba i-icon ineempawu zayo zobuso, umntu ophuphayo unokuzibona ekwilizwe elivukayo eligqibelele ngakumbi kunoko eyinyani. Oku kubonisa ukuphakama okungafanelekanga Ukuzithemba, apho azibeka ngaphezu kwabanye abantu kwaye ufuna ukwahlula kubo njenge icon.
Nangona kunjalo, ukubona i-icon ephupheni kunokubonisa ngokulula inkolelo kunye nokunxibelelana kwephupha nenkolo. Uziva uzinze ngokuqinileyo koku kwaye uyibona njengenxalenye ebalulekileyo yobomi bakho.
Uphawu lwephupha «Icon» - ukutolika kokomoya
Ukusuka kwindawo yokomoya yokujonga, "i icon" yomfanekiso wephupha ifanekisela umfanekiso omkhulu kwaye Isango kwilizwe lokomoya.